Fitsangatsanganana ho an'ny UAE
Ny Emira Arabo dia firenena manana firaisana mahagaga ny fomban-drazana taloha sy ny zava-bita farany momba ny kolontsaina sy ny sivilizasiona, toeram-ponenana tsy manam-paharoa amin'ny trano fandraisam-bahiny tsara tarehy sy trano fialofana sy tranom-panjakana ary tranombakoka. Fialan-tsasatra any Emirà Arabo, ary ny mpizahatany rehetra dia afaka misafidy ny fialam-boly sy ny fialam-boly ho azy ireo, mba hahafahan'ny fitsangatsanganana any UAE no hetsika tsy hay hadinoina.
Inona ny fitsangatsanganana azonao atao hitsidihana ny UAE?
Ireto ny làlana manan-danja amin'ny lalana fitetezam-paritra mankany UAE:
Fialan-tsasatra. Anisan'izany ny fitsangatsanganana ho any an-drenivohitry ny Emirà Arabo - Abu Dhabi , mankany amin'ny fialamboly mahafinaritra indrindra eran-tany - Dubai , ary koa ho an'i Sharjah , Ras Al Khaimah , Fujairah ary ny hafa.
Fialambolan-tsambo - fitsangantsanganana, fanjonoana , fitsangatsanganana, sns.
Safari any an-tendrombohitra sy any an-tany foana amin'ny jeep.
Toeram-ponenana rano sy zaridaina amidy . Any amin'ny Emirates dia safidy goavana, anisan'izany ny dobo Aquaventure sy Wild Wadi , Dreamland ao Umm al-Kuwain, ary ny hafa.
Fialantsasatra mahery vaika - fanjonoana , parachute jumping, sidina amin'ny fiaramanidina, fitsangatsanganana toeram-pialan-tsambo .
Mialà sasatra. Ao anatin'ity sokajy ity, dia afaka miditra fitsangatsanganana amin'ny loharanom-baovaon'ny radon, fitsidihana ny fandroana Maraokana , fitsangatsanganana ao amin'ireo toeram-pitsaboana.
Ny fitsangatsanganana mankany amin'ny fitsangatsanganana - dia ahitana fitsidihana any amin'ireo foibe lehibe indrindra sy malaza indrindra ao amin'ny firenena, toy ny Dubai Mall .
Fialan-tsasatra manokana ho an'ny UAE. Eto, ny sidina fantatry ny mpizahatany dia voafetra ihany amin'ny vola, satria ny UAE dia manana toerana tsy manam-paharoa izay tsy anisan'ny be mpitsidika indrindra, fa azo antoka fa marim-pototra. Anisan'izany ny loharano iray any an'efitra, ny fivarotana diamondra, ny hotely 7 *, sns.
Top 20 fitsangantsanganana tany UAE
Andeha hodinihintsika amin'ny antsipiriany ireo fitsangantsanganana mahaliana sy malaza ao amin'ny Emira Arabo:
Abu Dhabi. Ny fitsidihana an-tsehatra mankany an-drenivohitry ny firenena dia ahitana ny fitsidihan'ireo zaridaina sy zaridaina mahafinaritra, trano tsara tarehy mahavariana, loharano mafana ary mazava ho azy ny lapan'i Sheikh . Mandritra ny dia dia hisy toeram-piantsenana ahafantarana ny toeram-pialam-boly tena tsara, ny lehibe indrindra amin'ny kianja Afovoany Atsinanana, ny fampirantiana solika. Ny fitsidihana dia mifarana amin'ny sakafo hariva amin'ny iray amin'ireo trano fisakafoanana tsara indrindra any Abu Dhabi ao amin'ny trano fiarovana.
Dubai. Angamba ny iray amin'ireo fitsangantsanganana mahafinaritra indrindra any Emirates, satria i Dubai no foiben'ny fivarotana lehibe eran-tany, iray amin'ireo toerana mahafinaritra indrindra eran-tany amin'ny fialam-boly maro. Ho hitanao ny tsenan'ny volamena ao afovoan-tanàna (vidiny ambany ny vidiny), tsena ara- tsakafo sy oriental , ny foibe fandraharahana lehibe indrindra ao Dubai Mall, dia hahita rameva camel , tranom-bakoka manan-tantara, moske manan-tantara lehibe indrindra, loharano mihira , Miracle Garden sy ny maro hafa. et al.
Sharjah. Ny tanàn-dehibe indrindra dia manintona ireo mpizahatany sy ny haavon-tsavony tsara tarehy atsinanana. Nandritra ny fitsidihana an'i Sharjah ho any UAE dia hahita ny kianjan'ny kolontsaina, tranoben'ny Sheikh, Pearl Monument, moske, tsena, bazaars, sns., Mitaingina sambo Arabo teny amin'ny banga ary mijery ny tanàna avy eo.
Fujairah. Manam-pahaizana manokana koa io emirate io, satria mahaliana ny fisian'ny tanàn-dehibe miavaka, tanàna kely iray, zaridaina, toeram-pivarotana ary karazana fialamboly hafa. Misy fitsangatsanganana maro avy any Fujairah any Emirà Arabo Mitambatra, anisan'izany ny Safaris, ny lalan-kaleha, ny bala, ny baolina mafana, ny fitsidihan'ireo fiaramanidina fahiny, ary ny fitsangatsanganana mankany amin'ny foibe fialamboly.
Ras Al Khaimah. Ny tanàna dia tena malaza, ao amin'ny tapany taloha dia misy ny National Museum mahaliana, ary ao anatin'ny 20 minitra no loharano mafana ao Katta. Fitsangatsanganana avy any Ras Al Khaimah mankany Emirà Arabo Mitambatra ny fitsangatsanganana ho any Dubai sy Abu Dhabi, any amin'ny morontsiraka Ranomasimbe Indiana, mankany amin'ny kianja fiaramanidina Ferrari World .
Fialan-tsasatra tany El Ain . Ity dia fitsangatsanganana ho an'ny oasis Arabo ao UAE, voahodidin'ny dongom-pasika, miorina amin'ny sisin-tany miaraka amin'i Oman. El Ain dia tanàna voninkazo. Misy zaridaina botanika mahafinaritra, ilay zozoro malaza (ao amin'ny faritaniny no hivezivezin'ny locomotive) ary sehatra iray amin'ny sehatra goavana izay mitondra ny serpentine.
Fiaramanidina amin'ny sambony. Safidy tena tsara ho an'ireo tia ny fitiavana sy ny fahafahana hahita ny tsara indrindra amin'ny jiro hariva ao Dubai. Ny fitsidihana dia manakaiky ny Creek Bay. Ny safidin'ilay sambo dia anao - mety ho sambo kely kely, na yacht maoderina. Ankoatra izany dia mozika mahafinaritra, jiro miloko ary buffet miaraka amin'ny sakafo sns.
Trondro eny amin'ny ranomasina. Ny fitsangatsanganana dia midika hoe mankany amin'ny ranomasina misokatra amin'ny sambon-kisakely sy ny fihazakazahana an-dranomasina ho an'ny antsantsa. Ao an-tsambo, ireo vahiny dia afaka misotro zava-pisotro sy ny sakafony, manomana sakafo amin'ny yacht na sakafo rehefa avy nitsidika ny trano fisakafoanan'ny klioba.
Hianjera amin'ny alina hozatra. Fialam-boly mahafinaritra amin'ny sambo mankany amin'ireo nosy akaikin'i Umm al-Kuwain. Hianatra ny fomba fahiny hikaroka kobaka miaraka amin'ny lefona sy lamatra mahery ianao. Aorian'ny fandefasana ny fitsangatsanganana ireo vozona voatsangatsanganana, ny lehiben'ny cook dia hiomana, ary ny mpizaha tany rehetra dia hanasa amin'ny sombin-tsakafo.
Jeep safari . Fivahinianana tsy hay hadinoina amin'ny rameva, sakafo hariva amin'ny fomban-drazana arabo miaraka amin'ny dihy mahavariana, mahazatra ny fomban-drazana sy ny fomban'ny Bedouins, skiing, moto ary jeeps amin'ny dongom-pasika.
Mountain safari. Tsara ny manamarika fa ny safari any UAE dia fitsangantsanganana mahafinaritra foana, izay ahitana fitsangantsanganana eny an-tendrombohitra miaraka amin'ny serpentines, milomano ao anaty ranon'ny farihy vaovao, mitsidika an'i Oman ary mitsambikina avy eo amin'ny vatolampy ka hatrany amin'ny canyon ka hatramin'ny 8 m ny haavony.
Aquapark Aquaventure. Io no valan-drano lehibe indrindra ao Dubai. Izy io dia mandrakotra faritra iray amin'ny tany 17 hektara ary manasa ireo vahiny hivezivezy amin'ny hills, rano manintona ary fialam-boly tsy mahazatra.
Camel Race. Manatrika ny ramevan'ny karazana rameva izy ireo, ary ny mpitaingina dia ankizy 6 ka hatramin'ny 9 taona. Ny mpandresy dia nomena loka tena sarobidy (ohatra, trano, fiara na fiaramanidina), ary mandray anjara amin'ny emir ny mpandray anjara tsirairay.
Mankanesa any Hatta fort . Hitsidika ilay tanàna kelin'i Hatta kely ianao, izay ahafahanao mianatra kely momba ny tantaran'ireo toerana ireo, mankasitraka ny loko sy ny lokan'ny tampon'ny tendrombohitra.
Fialofana amin'ny fiaramanidina na parachute mitsambikina (natao fotsiny amin'ny mpampianatra). Io no iray amin'ireo fialantsasatry ny olona manokana mahaliana indrindra amin'ny UAE amin'ny 2017. Amin'ny tranga voalohany, avy amin'ny fomba fijerin'ny vorona iray dia hahita ireo valan-javaboahary sy dongom-pasika ao Umm al-Kuwain ianao ary hiaina ny tenany ho mpanamory fiaramanidina, ary amin'ny faharoa dia hahazo traikefa tsy hay hadinoina ianao amin'ny fiaramanidina amin'ny lozam-pifamoivoizana maherin'ny 4000 metatra ao anaty paroasy manokana miaraka amin'ny traikefa mpampianatra.
Fialan-tsasatra any Burj Al Arab . Ny tilikambo no hotely avo indrindra sy mahavariana indrindra eto an-tany, ny 7 sy 7 ny isany. Tetikasa tokana, endri-panamboaran-trano manokana, aquariums, loharano, barazy eo ambanin'ny rano sy any an-danitra - izany no azonao jerena mandritra ny diany.
Fialan-tsasatra ho an'ny klioban'ny mpilalao (klioban'ny mpamorona) Ao amin'ny klioban'ny elikan'ny sheikh no hatolotra anao hisafidy ny fitaovanao manokana, dia hasaina ary hanome anao ny fahafahana hitsapa ny herinao amin'ny fitifirana tifitra. Ny vahiny rehetra - fanasana, fanomezana kely ary sary ho fahatsiarovana. Ho an'ny saram-panafarana fanampiny dia afaka milalao lalao koa ianao.
Ski Resort Ski Dubai. Io no hany toeram-pisakafoanana an-tokotany anaty aterineto any Afovoany Atsinanana, izay mitondra mpankafy ny ririnina tafahoatra any amin'ny firenena Arabo mafana.
Maraokana fandroana. Ny fitsangatsanganana dia natao ho an'ny vehivavy ary ahitana ny famangiana toeram-pisakafoanana, ny fampiasana gely voajanahary amin'ny vatana, ny fanasitranana matihanina ary ny masony mamelombelona. Ny fiaraha-mientana rehetra dia hanampy amin'ny fanatsarana ny toe-tsaina, ny fanesorana ny toaka sy ny toxins, mahatonga ny vatanao ho malefaka sy mety, hanamafisana ny hatsarana.
Alefaso any amin'ny Mall Dubai. Ity no ivontoerana fandraharahana lehibe indrindra sy mahavariana indrindra any Moyen-Orient, izay misy maso vitsivitsy monja, avy amin'ny fivarotam-pivarotana, ny trano fandraisam-bahiny ary ny fialamboly hafa. Ankoatra ny fiantsenana, ao amin'ny Mall Dubai dia afaka mitsidika ny dobo misy aquarium sy ny zoo ambanin'ny tany miaraka amin'ny mponina 33000, niditra tao amin'ny Guinness Book of Records.
Ny fisotroan-dronono any UAE ho an'ny mpizaha tany
Feng Shui loko
Fenitra fanolo ao amin'ny efitrano fandriana
Ny Supermodel Natalia Vodyanova dia nizara ampahany amin'ny endrika
Robert Pattinson dia nanamafy tamim-pitandremana ny fofombadiny tamin'i Talia Barnett
Ahoana ny fomba hanitsiana ny asan'ny tsinay?
Jeans mikotrika - amin'ny inona no tokony hitafy sy ny fomba hamoronana sary hoso-doko?
Ny tongotra diabetika - soritr'aretina